सिड्नीबाट मेलवर्नतर्फ गइरहेको रेल दुर्घटना, दुई जनाको मृत्यु
सिड्नी । अष्ट्रेलियाको सिड्नीबाट मेलवर्नतर्फ गइरहेको रेल दुर्घटना भएको छ । स्थानीय समयअनुसार बिहीबार बेलुका ७ः४५ बजे उक्त रेल वालन स्टेशननजिकै दुर्घटना भएको हो ।
एक्सपीटी यात्रुवाहक रेल मेलवर्नबाट ४५ किलोमिटर उत्तरमा दुर्घटना भएको समाचारहरुमा उल्लेख छ । दुर्घटनामा परेर दुई जनाको ज्यान गएको बताइएको छ । केही घाइतेहरुको उद्दार गरेर अस्पताल पुर्याइएको छ ।
दुर्घटनापछि रेलको केही डिब्बाहरु लिगभन्दा बाहिर पुगेको छ । उक्त । रेलमा करिब २ सय यात्रुहरु रहेको अनुमान गरिएको छ ।
दुर्घटनाको कारणबारे भने केही पनि खुलाइएको छैन । यसबारेमा रेल विभागले अनुसन्धान गरिरहेको बताएको छ ।
विदेशमा रहेका विद्यार्थीलाई नेपालबाट रकम पठाउन सहज !
सिड्नी । कोरोना भाईरसका कारण संसार नै ठप्प जस्तो भएको बेला विदेशमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीका लागि सरकारले नयाँ प्रावधान जारी गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विदेशमा रहेका विद्यार्थीलाई नेपालबा
अष्ट्रेलियामा कोरोना भाइरसः कति पुग्यो मृतक र संक्रमितको संख्या ?
सिड्नी । अष्ट्रेलियामा कोरोना भाइरसका कारण हालसम्म १८ जनाको मृत्यु भएको छ । त्यस्तै संक्रमितको संख्या ४ हजार १६३ पुगेको छ । आजमात्रै एक जनाको भाइरसका कारण ज्यान गएको छ ।
सर्वसाधरणलाई प्रहरीले सिलिण्डर बोकाएको घटनाबारे छानबिन हुँदै
काठमाडौँ । नेपाल प्रहरीका कर्मचारीले एक सर्वसाधरणलाई ग्यासको सिलिण्डर बोकाएर सडकमा बसाएको घटनाबारे अनुसन्धान भइरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा उक्त फोटो सार्वजनिक भएपछि कडा आलोचना खेपेको प्रहरीले उक्त घटना